China ndokugadzira Steel Globe Valve fekitari uye vagadziri | Nortech
Chii API602 ndokugadzira simbi globe vharafu?
API602 Ndokugadzira Steel Globe Valve dhizaini yakakosha yemadhizaizi madiki epasi.
Sevharuvhu yepasi, ine hunhu hwese vharafu, inokurumidza kuvhura nekuvhara.
semahara, seyakajairika, ekuvhura uye ekuvhara zvikamu gedhi, muchimiro che wedge, ndosaka ivo vachinzi sevheji yevhavha vheji. iyo nzira yekufamba kwegedhi inoenderana nenzira yemvura. Iyo vheji yegedhi vheji inogona kungovhurwa zvizere uye kuvharwa zvizere uye haigone kugadziridzwa uye kumonyoroka. Vheji vheji rakagadzirwa kuti rishandiswe rakavhurika zvakakwana kana rakazara rakapfigwa, nekuti nekuda kwechimiro chemabutiro ayo ayo ane chimiro chekanda. , kana ikashandisirwa zvishoma yakavhurika, paizova nekurasikirwa kukuru kwekumanikidzwa uye iyo yekuisa chisimbiso ichave yakaparadzwa pasi pesimba remvura.
asi API602 ndokugadzira simbi globe vharafu ine zvimiro zvayo.yakagadzirwa neyakagadzirwa kabhoni simbi, simbi isina chinhu, simbi yesimbi, ine muviri wakaumbana, inokodzera kumanikidza kwakanyanya fluid.bhoneti rinogona kuvezwa, rakasungwa uye kumanikidzwa kwakanamwa, zvinoenderana nemamiriro ekushanda.
Main zviri API602 ndokugadzira simbi globe vharafu?
Main maficha eAPI602 ndokugadzira simbi globe vharafu
8) Nzvimbo dzakaomeswa dzekunamatira dzakatemerwa nesetiraiti dzinopa kuramba kuramba kupfeka, kusuka uye kukukurwa kwenzvimbo dzekuisa chisimbiso.
Technical magadzirirwo e API602 ndokugadzira simbi globe vharafu?
Rondedzero yeAPI602 ndokugadzira simbi globe vharafu
Flanges (yakakosha uye yakasungwa) ASME B16.5
Kushandiswa API602 ndokugadzira simbi globe mavharuvhu
Iyi mhando yeAPI 602 Ndokugadzira Steel Globe Valve inoshandiswa zvakanyanya mupayipi nemvura & zvimwe zvinwiwa. Peturu, oiri, Chemical, Petrochemical, Simba uye Zvishandiso nezvimwe, kunyanya mumamiriro ezvinhu ekuti kuyerera kwakanyanya kushanda, kuvharwa kwakasimba uye basa refu rinodiwa. Sarudzo yakafara yeshell uye zvinhu zvekuchekesa zvinovhara huwandu hwese hwezvishandiso, kubva kune yega-yezuva mhando yemhando isiri-inoshatisa sevhisi kune yakanyanya sevhisi ine midhiya ine hukasha.
Pashure: Ndokugadzira Steel Gate Valve
Zvadaro: Inotya Yakagadziriswa Yakagara Yakagara Butterfly Valve China fekitori
Yakagadziriswa Globe Valve
API602 pasi vharafu
mvuto chisimbiso pasi vharafu
Magetsi Globe Valve
Yakakwira Pressure Globe Valve
Yakasungirirwa Globe Valve